जनताको जिवन स्तर उकास्न सकियो भने मात्रै समृद्ध नेपाल बन्छ : अध्यक्ष शाक्य
मंगलबार, साउन २०, २०७७ ११:५०:२५ युनिकोड
सुनको मूल्य १ लाख नजिक,मूल्य अत्यधिक बढेसँगै कारोबार ठप्प
आज ‘गाईजात्रा’ : दिवङ्गत आफन्तको सम्झनामा मनाइँदै,यस्तो छ धार्मिक कारण !
प्रत्यूष दैनिक पत्रिकाको सम्पादकमा अनिल कुमार नेपाली
सहारा सहकारीको स्थापना दिवसको अवसरमा रक्तदान,७१ जनाले गरे रक्तदान
कोरोना अपडेट:नेपालमा ४ सय १८ संक्रमित थपिए,३ सय ५८ जना जना डिस्चार्ज
सिन्धुपाल्चोकमा पहिरोमा पुरिएर १० जनाको मृत्यु,१ घाईते
धादिङमा २७ हजार सवारी कारवाहीमा,१ करोड ५७ लाख राजस्व संकलन
आज रक्षाबन्धन,जनै पूर्णिमा र क्वाँटी खाने दिन(यस्तो छ धार्मिक विश्वास)
आरडिटीबाट कोरोना परीक्षण नगर्न सरकारको निर्देशन
जेष्ठ नागरिक र बालबालिकालाई घर बाहिर ननिस्कन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह
नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणबाट थप एकको मृत्यु,संङ्ख्या ५७ पुग्यो
कोरोना अपडेट: नेपालमा २ सय ४२ संक्रमित थपिए,१ सय ११ जना डिस्चार्ज
कोरोना कारण भारतमा २५ नेपालीको मृत्यु
धादिङको पशुपति मन्दिरमा चोरी
धादिङमा १ सय २५ सवारी दुर्घटना,५३ जनाको ज्यान गयो
जनताले महसुस गर्ने गरी विकासको काम अघि बढाएको छु ।
शनिबार, असार २०, २०७७ Dhading Sanchar
नेत्रावती डवजोङ गाउँपालिकामा कृषि, खानेपानी,सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर काम भईरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्ग कुमार शाक्यले बताउनु भएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘ समृद्ध नेपाल सुखि नेपाली बन्नलाई बाटो निर्माण भएर मात्रै हुदैन जनताको जिवन स्तर उकास्न सकियो भने मात्रै समृद्ध नेपाल सुखि नेपाली बन्छ । हामीले त्यो हैसियत बन्नको लागि कृषि उत्पादनमा जोड दिईरहेका छौं ।
हामीले प्रविधिमैत्री शिक्षाहरु दिने योजनामा छौं । सँगै विद्यालयमा पनि स्मार्ट टि.भी. राख्ने छौं । होला हामीले सत प्रतिशत उपलब्धी गर्न नसकुला तर केहि न केहि उपलब्धी त गर्न सक्छौं नि ।’ यस्तै गाउँपालिकाको समग्र विकास,भावी योजना,कोरोना बिरुद्ध गाउँपालिकाले गरेको गतिबिधिका बिषयमा जनतासँग रेडियो प्रमुख रेडियो कार्यक्रममा पत्रकार रामकुमार थापाले तिनै नेत्रावती डवजोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्ग कुमार शाक्यसँग गर्नुभएको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंशः
१. लकडाउन सुरु भएदेखि रात दिन नभनि काम गरिरहनु भएको छ के कस्तो भईरहेको छ अहिले ?
२. तपाई त्यहाँ आफ्नो जिवन जोखिमा राखेर किन जानुभयो र त्यहाँ जाँदाको स्थिती कस्तो भयो ?
म त्यहाँ जानुको तात्पर्य विभिन्न ठाउँको क्वारेन्टाईनहरुमा हाम्रो गाउँपालिकाका साथीहरु छरिएर रहेको अवस्था थियो । त्यहाँ गाडी मात्रै लैजाँदा छल्लिन सक्ने सम्भावना रहेको कारणले गर्दा पनि म आफैं गए । अर्को कुरा त्यहाँको अवस्था के कस्तो छ भनेर बुझ्नको लागि म आफैं बुझ्न गए । मेरो आफ्नो गाउँपालिकाको त १० जना भन्दा थिएनन् । मैले ५/७ ठाउँ बाट ल्याए । मैले उहाँहरु सबैलाई फोन गरेर खोज्दै ल्याए । त्यत्तिबेला अलि समस्या नै थियो ।
किनकि मानिसमा एउटा त्रास थियो सँग सँगै खान वस्नको लागि पैसा नभएको गुनासाहरु आएका थियो । हामीलाई उता बाट आउदा भन्दा पनि त्यहाँ क्वारेन्टाईनमा बस्दा संक्रमित भईहालिन्छ कि भन्ने चिन्त्ता भएको थियो । अहिले नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिकाको जति पनि व्यक्तिहरु ईन्डियाबाट आएका छन् त्यहाँ हामीले बोर्डरमा क्वारेन्टाईनमा बस्नुपर्ने अवस्था छैन हामीले त्यहाँ प्रहरी सँग सिधैं सम्पर्क गरेर उहाँहरुले गाडी खोजेर पठाईरहनु भएको छ ।
३. तपाई त्यहाँ जानु अघि केहि हुन्छ कि अथवा परिवारका सदस्यले नजान भन्ने कुरा आयो कि आएन ?
४. गाउँपालिकाले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको लागि के गरिरहेको छ ?
५. अहिले ईन्डीया बाट आएकाहरुलाई क्वारेन्टाईनमा राखिएको छ पछिल्लो पटक आउनेहरुलाई थप क्वारेन्टाईन के कस्तो छ ?
आईसोलेशन हाम्रो गाउँमा त्यो सम्भावना छैन । त्यसको लागि एमविविए्स डाक्टरहरु पनि चाहिन्छ । ल्याव टेक्निसियनहरु प्नि चाहिन्छ । डाक्टरहरुको टिमहरु पनि १५ दिन सम्म आफै क्वारेन्टाईनमा वस्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसैले हामीले आईसोलेशनको व्यवस्था गर्दैनौं । क्वारेन्टाईनको व्यवस्था गर्छौं । जसको स्वाव टेष्ट गरेर पीसिआरको रिपोर्ट नआउन्जेल सम्म हामीले त्यही क्वारेन्टाईनमा राख्छौं । यदि पोजेटिभ आयो भने धादिङ काठमाण्डौं पठाउछौं । हामी सँग त्यो क्षमता पनि छैन । हामीले आरडीटी सँगै पिसिआर पनि गरिरहेका छौं ।
६. हामीले कति सम्म थेग्न सक्छौं विदेश बाट आउनेहरु ?
एकैचोटी ठुलो संख्यामा त आउदैन हाम्रो गाउँपालिकामा । मलाई लाग्छ एउटै फ्लाईटमा दश पन्ध्र जना आउन सक्छन् । त्यसको लागि खासै समस्या पर्दैन । गाउँपालिका भित्रका विद्यालयहरुमा क्वारेन्टाईन बनाएका छौं । हामीले जति सक्दो धेरै राख्न सक्ने ठाउँमा क्वारेन्टाईन बनाएका छौं । महेन्द्र बाराही, नारायणी देवी र शान्ती कालिमा पनि राखि सकेका छौं । त्यसको अवधि सकिसकेपछि त्यहाँ बाट हटाएर महेन्द्र वाराही मा.वि र चौतारा मा.वि, कन्यादेवी आ.वि र निरन्जना आ.वि मा राख्ने सोच बनाएका छौं ।
७. त्यहाँ वस्दाको खाना खर्च सबै गाउँपालिकाले हेर्छ होईन ?
८. यसले गर्दा पछि गएर बजेटको समस्या हुन सक्छ नि ?
अब बजेटको त समस्या हुन सक्छ । अहिले छोटो समयमा कोरोना भाईरसको सुरु भएपछि ३०/४० लाख सकिसकेको अवस्था छ । कहिले सम्म कोरोना भाईरस फैलिरहन्छ थाहा छैन । त्यसैले आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को बजेटमा हामीले १ करोड रुपँैया पैसा कोरोना कोष भनेर छुट्याएका छौं ।
हामीले वैदेशिक रोजगार बाट फर्किएकाहरुको लागि पनि श्रम बैंक तयार गरेका छौं । लैङगीक समानता भन्ने कार्यक्रममा पनि हामीले ४० लाख बराबरको बजेट छुट्याएका छौं । स्वरोजगार उन्मुख एउटा सहकारी संघ साझेदारी गरेर जाने भनेर ३५ लाख जति छुट्याएका छौं । संघिय सरकार बाट पनि त्यो श्रम बैंकमा राख्न मिल्ने पैसा ५३ लाख जति आएको छ ।
८. श्रम बैंकको अवधारणा कस्तो हो ?
९. यस्तो बेलामा तपाईहरुले यस्तो नयाँ–नयाँ कामहरु गर्ने सोचहरु कसरी आँउछ ?
कतिपय कुराहरु साथीहरु सँग पनि बुझ्छु । कतिपय कुराहरु म आफैले सोचिरहेको हुन्छु । परिस्थिती अनुसार कसरी चल्ने भनेर । सोचिरहेको हुन्छु । मैले धेरै सोचे पछि कुन सहि छ भनेर बुझेर प्रस्ताव लिएर जाने गर्छु । त्यो ढङगले कार्यक्रम गरिरहेको हुन्छु । मैले के काम गर्दा समुदायमा राम्रो हुन्छ भनेर कार्यक्रम गरिरहेको हुन्छु । कतिपयले समुदायमा चामल ल्याएर बाँडेका थिए । तर हामीले उनीहरुलाई रोजगार दियौं ।
त्यही कारणले गर्दा ठाउँ ठाउँमा सोलिङ गरेको छ जसको कारणले अहिले बाटो चलिरहेको छ । मैले जनतालाई काम गरेर खाने वातावरण बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा गरे । अहिले मलाई लाग्छ केन्द्र सरकारले पनि श्रम बैंक हामीले राखेका थियौं त्यसको कपी गरेर उनीहरुले राखेका हुन् । हाम्रो गाउँपलिकाले स्वरोजगार मुल एउटा कार्यक्रम सहकारी सँग समन्वय गरेर जाने भनेका थियौं त्यही कार्यक्रम उता बाट पनि आयो हामीले उता बाट के आउछ भनेका थिएनौं । हामीलाई के लाग्यो भने केन्द्रले सोच्या जस्तो कार्यक्रम हामीले पनि गरिरहेका रहेछौं । आगामी आर्थिक वर्षमा पनि यो कार्यक्रम कायम नै रहन्छ ।
१०. अबको आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाका केहि युवाहरु स्वरोजगार हुन्छन् ?
११. यो आर्थिक वर्षको समिक्षा गर्दा गाउँपालिकाले कत्तिको काम गर्न सक्यौं ?
विकासको काममा हामीलाई केहि केहि योजनाहरु हुन् । तर हामीले लकडाउन हुनुभन्दा पहिले हामीले ८० प्रतिशत काम सम्पन्न गरिसकेका छौं । त्यसैले एउटा दुई वटा योजनाहरु कार्यन्वयन नहुने अवस्थामा पुगेको छ । किनकि हामीले असारमा काम गर्दैनौं । त्यसलाई निरन्तरता दिन गाउँ सभा बाट अनुमोदन गरेर लैजान्छौं ।
कोरोना कै कारणले गर्दा रोकियो नत्र भने हामीले चैत भित्रमा सम्पन्न गर्ने भनेर लागेका थियौं । तर हाम्रो धेरै कामहरु चालु अवस्थामा छ । धादिङ जिल्लामा बजेट कार्यन्वयनको कुरामा हेर्ने हो भने एक नम्बरमा आउछ । अरु अरु गाउँपालिकाले धेरै बजेटहरु कार्यन्वयन गर्न बाँकी रहेको छ ।
हामी कहाँ त्यस्तो छैन । हामी सँग करोडको कुरा छैन लाखको कुरा मात्रै हो । विकासको कामहरु क्षमताका कामहरु नगरिएको काम अवस्था । तर विकास निर्माण पूर्वाधारको कुरा ९७/९८ प्रतिशत सकिन्थ्यो । कोरोनाले हामीले लक्ष्य राखे अनुरुपको काम गर्न सकिरहेको छैन । हामीले यो वर्ष गाउँपालिकालाई खानेपानीको सुविधा सम्पन्न बनाउने योजना थियो तर त्यसमा असर पुर्याएको छ । गाउँपालिकाको ४ र ५ नम्बर वडाहरु तिर्खा मुक्त वडा बनाउने छौं । गत वर्ष हुन नसकेका कार्यक्रमहरुलाई पनि निरन्तरता दिने छौं ।
१२. यो भनेको एउटा अवसर पनि हो । प्रतिस्पर्धाको हिसावले अन्य गाउँपालिका सँग कत्तिको प्रतिस्पर्धा गर्न मन लाग्ने रहेछ ?
१३.अहिले सम्म गाउँपालिकाले यो यो फरक गर्यो भन्नुपर्दा के–के फरक काम गरेको छ ?
१४. अब आगामी आर्थिक वर्षमा देखिने कार्यक्रमहरु के छन् ?
हाम्रो फोकस भनेको कृषि हो । तर साथीहरुले गौरवको बाटो बनाउने गौरवको काम भन्नु भएको छ । मैले यदि कुनै वडाले बाटो बनाउने योजना ल्याउनु भयो भने त्यो कार्यन्वयन नहुने भनेको छु । यदि जनताको जिवन स्तर उकास्ने खालको काम हो भने कार्यन्वयन हुन्छ । हामीले बाटो जति सुकै राम्रो बनाए पनि वर्खा समयमा परेको पानीले बनाएको पनि नबनाएको सरह हुन्छ । अब पछि आउने पुस्ताहरुले पनि विकास भएको देख्न सकुन । समृद्ध नेपाल सुखि नेपाली बन्नलाई बाटो निर्माण भएर मात्रै हुदैन जनताको जिवन स्तर उकास्न सकियो भने मात्रै समृद्ध नेपाल सुखि नेपाली बन्छ ।
हामीले त्यो हैसियत बन्नको लागि कृषि उत्पादनमा जोड दिईरहेका छौं । हामीले प्रविधिमैत्री शिक्षाहरु दिने योजनामा छौं । सँगै विद्यालयमा पनि स्मार्ट टि.भी. राख्ने छौं । होला हामीले सत प्रतिशत उपलब्धी गर्न नसकुला तर केहि न केहि उपलब्धी त गर्न सक्छौं नि । हामीले कोरोनाको केन्द्र बाट आउने पैसा छुट्टै छ । गाउँपालिकाले पनि कोरोना कोष राखेका छौं । स्वास्थ्यको लागि गाउँपालिकाले पहिला भन्दा धेरै बजेट राखेको छ ।
१५. अन्त्यमा रेडियो सुनेर बस्नुहुने स्रोताहरुलाई के भन्न चाहानुहुन्छ ?
के भन्न चाहान्छु भने कोरोना भाईरस नौलो छैन कसैको लागि । हामी मानसिक रुपमा आत्तिनुपर्ने छैन । यो भाईरस सँग जोगिन सक्यौं भने कुनै आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । हामी सुरक्षित भएर वस्न सक्यौ भने हामी सुरक्षित हुन्छौं । विदेश बाट आउनेहरुले आफु र परिवारलाई बचाउन क्वारेन्टाईनमा बस्न म अनुरोध पनि गर्छु ।
सबै नागरिकहरुलाई उच्च सतरर्कता अपनाएर बस्नुहोला । समुदायमा एक किसिमको हाउगुजी फैलिरहेको छ कोरोनाई भाईरस विरुद्ध । विदेश बाट आएका व्यक्तिहरुलाई समुदायले तुच्छ व्यवहार गरिरहेको देखिन्छ तर त्यस्तो गर्नु ठिक होईन । तर आफु सुरक्षित भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ । अन्त्यमा मलाई यहाँ आएर गाउँपालिकाको बारेमा केहि कुराहरु राख्ने अवसर दिनुभयो नीलकण्ठ एफ.एम परिवारलाई धेरै–धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
सुनको मूल्य १ लाख नजिक,मूल्य अत्यधिक बढेसँगै कारोबार ठप्प ३३ मिनेट पहिले
सुनको मूल्य १ लाख नजिक,मूल्य अत्यधिक बढेसँगै कारोबार ठप्प Dhading Sanchar
आज ‘गाईजात्रा’ : दिवङ्गत आफन्तको सम्झनामा मनाइँदै,यस्तो छ धार्मिक कारण ! Dhading Sanchar
सहारा सहकारीको स्थापना दिवसको अवसरमा रक्तदान,७१ जनाले गरे रक्तदान Dhading Sanchar
नेपालमा सुनको मुल्यको नयाँ रेकर्ड, तोलाको ९९ हजार ३ सय शुक्रबार, साउन १६, २०७७
मुक्तिनाथ विकास बैंकको कर्जामा भारी छुटै छुट,यस्ता छन् सेवा–सुविधा मंगलबार, साउन १३, २०७७
सहिदहरु वाग्ले र वस्नेतको १६ औं स्मृती दिवस धादिङबेशीमा मनाईयो बुधबार, साउन ७, २०७७
उद्धार,राहत,उपचार र पुर्नस्थापनको लागि एकजुट हुन सांसद लोहनीको आह्वान बुधबार, साउन ७, २०७७